Semalt: Indlela Yokunqanda I-Pop-Ups Kwi-Chrome
Ukuba uchithe ixesha elininzi kwi-intanethi, unokufumana iintengiso ezidangayo kunye neziqhelanisiweyo ngendlela yokupapashwa, izikhangiso zebhanki kunye nezikhangiso zokudlala ngokuzenzekelayo. U-Max Bell, u-10 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uchaza ukuba zonke ezi zipapasho ziyakunqandwa, kodwa kunokwenzeka ukuthatha inyathelo lokudibanisa bonke.
Vimba iintengiso ze-pop-up kwi-Chrome usebenzisa i-plugin ye-browser:
Nangona iiplagiza zokukhusela izixhobo ezahlukahlukeneyo zingasetyenziswa ngeGoogle Chrome, i-plugin engcono yi-Adblock Plus. Isebenza ngokuthula kwimvelaphi yesiphequluli sakho kwaye ayivumeli ukuba iintengiso ziyakucasula. Ukuba usebenzisa i-Firefox, awukwazi ukusebenzisa le plugin. Nangona kunjalo, ezinye iiplagi ezifanayo ziyafumaneka kubasebenzisi be-Firefox - aspire mini nautilus tank manual. Ufuna ukukhuphela kwaye ufake i-Adblock Plus kwaye ungakulibali ukuyisebenzisa. I-plugin iya kudibaniswa nesiphequluli sakho se-Chrome, ukuthintela ukuphuma kwamaphepha ukubonisa iintsuku eziliqela.
Yintoni i-Adblock Plus?
Njengoko sele kukhankanywe, i-Adblock Plus yi-plugin enokudibaniswa nesiphequluli sakho se-Google Chrome. Vula kwisiphequluli sakho se-Chrome uze u tyelele iSitolo sewebhu se-Chrome, silandelwe ngekhasi le-Adblock Plus Extension. Apha, uza kubona iqhosha elihlaza okwesibhakabhaka ekhoneni elichanekileyo, esithi Kongeza kwi-Chrome..Unokuchofoza olo khetho, kwaye ukongezwa kuya kulandwa ngokuzenzekelayo. Xa sele usebenze ngokupheleleyo, akudingeki uqalise kwakhona iifestile okanye isiphequluli sewebhu njengoko i-Adblock Plus iya kuqala ukusebenza. Olu longeza luya kufaka uphawu olubomvu olusibomvu kwicala lasekunene lomkhangeli wakho. Ngaliphi na ixesha, kunokwenzeka ukuba unqakraze kuyo kwaye ubone idatha malunga neentengiso eziye zivaliwe kwiiphequluli zakho. Unokukhusela ezinye iisayithi okanye iphepha elipheleleyo kwaye utshintshe iintengiso ezijoliswe kwiCandelo leenketho.
I-Adblock Plus ayikwazi ukuyisebenzisa into ethile, kuxhomekeke kwimithombo kunye nefomathi. Ukuba ufumana le ngxaki, kufuneka uqakraze kwiqhosha le-Stop kwaye ungayiqwalasela Ivumela le Nwebhusayithi ukuguqula zonke iinkqubo zokukhusela isikhangiso ngokukhawuleza. Ngapha koko, unokukhubaza loo nto kwi-ad blocker yakho kwaye uhlaziywe amaphepha aqulethe umxholo okanye amanqaku onokufuna ukuwahlola nokuwafunda. Ukuba konke kwenziwe ngokufanelekileyo, uya kuqhubeka nokufunda umxholo ngokuqhelekileyo.
Kufuneka ukhumbule ukuba i-Adblock Plus ayiqinisekisi ukuba zonke iintengiso ziya kukhutshwa kwisiphequluli sakho se-Google Chrome, kodwa ibamba ininzi yazo. Kukho iinkampani ezinamhlophe kunye neemveliso ezihlawula kakhulu ukuba iintengiso zabo zingabandakanyekanga ngaba-block block. Ngenhlanhla, iinkampani zihlawula ngokukhawuleza kwiintengiso ezinjalo; kuthetha ukuba unokutshintshisa phantse zonke iintengiso ezivela kumasayithi akho kunye neziphequluli zewebhu.
Eyona ndlela: iPoper Blocker Pro:
I-Poper Blocker efanelekileyo yindlela eya ku-Adblock Plus. Isixhobo esihle kakhulu, esingenasisiseko. Ukuba ufuna inkqubo elula kodwa emangalisayo engathinteli kwiintengiso ezininzi kunye neethagethi ezizodwa kuphela, sincoma ukuba uzame i-Poper Ad Blocker. Kuqinisekisa ukusinika izaziso ngokukhawuleza malunga nokuba uyayivimba indawo ethile okanye ayikho kwaye ikuvumela ukuba ulondoloze ixesha elide. Ukongezelela, izaziso zayo zisenza sivimbele okanye siphumelele iintengiso ezingenakufunyanwa kwixesha elizayo.